Ra’iisul wasaare Kheyre oo booqday dekedda magaalada Kismaayo (SAWIRO) – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Ra’iisul wasaare Kheyre oo booqday dekedda magaalada Kismaayo (SAWIRO)
Ra’iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Mudane Axmed Madoobe ayaa shir-guddoomiyay shir hordhac ahaa oo ay golaha wasiirada federaalka iyo golaha wasiirada Jubbaland ay ku yeesheen magaalada Kismaayo, waxaana uu sidoo kale ra’iisul wasaaruhu booqday dekadda magaalada Kismaayo.
Ra’iisul wasaare Kheyre oo furay shirkaan ayaa u mahadceliyey madaxweynaha maamulka Jubbaland, ku xigeenadiisa, xubnaha wasiirada iyo shacabka Jubbaland sida sharafta leh ee loo soo dhaweeyey.
Ra’iisul wasaaraha ayaa sheegay in shirkaan uu hordhaca uu yahay mid isbarasho iyo in wasiir walba oo federaalka ah uu waqti xog-wareysi gaar ah la qaato wasiirada Jubbaland oo ay ka wada hadlaan xiriirka iyo wadashaqeynta.
Madaxweyne Axmed Madoobe oo soo dhaweeyay ra’iisul wasaaraha, ku-xigeenkiisa iyo wasiirada federaalka una sheegey in Jubbaland ay aad ugu faraxsan tahay in shirka golaha wasiirada dowlada federaalka uu ka qabsoomo magaalada Kismaayo ee xarunta KMG Jubbaland.
Ra’iisul wasaaraha ayaa sidoo kale sheegay in kullanka golaha wasiirada ee ka dhacaya Kismaayo uu yahay mid taariikhi ah oo uljeedadiisu tahay in dowladnimada loo dhaweeyo shacabka deegaanada dalka oo dhan.
Dhanka kale, wafdiga ra’iisul wasaaraha ayaa kormeer ku tagey marsadda Kismaayo, xilli ay halkaasi ku suganaayeen maraakiib iyo doomo ganacsi oo laga dajinayay shixnado kala duwan, waxaana ra’iisul wasaare Kheyre iyo wafdigiisa ay kusoo wareegeen dhamaan qeybaha kala duwan ee dekadda.
Intii uu ra’iisul wasaaraha iyo wafdigiisa ay ku sugnaayeen gudaha dekadda ayaa warbixin kooban laga siiyay habka ay u shaqeeyso dakadda, iyadoona sidoo kale ra’iisul wasaaruhu uu indhiisa ku arkay sida ay dekaddu ugu baahan tahay in dib u casriyeyn lagu sameeyey, wuxuna tilmaamay in dowladda Soomaaliya ay xooga saari doonto dib u dhiska ilaha dhaqaale ee dalka oo kamid tahay dekadda Kismaayo afarta dekedood ee ugu waaweyn dalkeena.